လေနုအေး: အချစ်ရိုင်းတို့ အချစ်ဦး
Posted by တန်ခူး at 1:34 AM
ကျမလို သူ့ရင်ခွင်ထဲ ရှစ်နှစ်တာ နေထိုင်ရင်း ဖြတ်သွားဖြတ်လာပတ်သက်ခဲ့ရသူတောင် ပါပါ ပင်စင်ယူလို့ ကျောင်းဝင်းထဲကနေ ပြောင်းတော့ မျက်ရည်ကျရပါတယ်။ ပြီးတော့ ညညတွေ အိပ်မက် မကြာခဏ မက်တာ ခုချိန်ထိ..။
အာအိုင်တီကျောင်းသူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် အမြဲ ဂုဏ်ယူမိတယ်။
ငါတို့ကျောင်းကို ဘယ်လိုဖျက်ဖျက် ငါတို့ရင်ထဲမှာစီးဆင်းနေတဲ့ အာအိုင်တီသွေးတွေကတော့ အမြဲနီရဲနေဆဲ။
အမရာ.. ကျောင်းကို ကျောင်းကို လွမ်းလိုက်တာ..အခုတလော..ကျောင်းအကြောင်းတွေပဲ ဖတ်နေရတော့ ပိုလွမ်းတယ်။
ငိုတောင် ငိုချင်သွားတယ် တန်ခူးရယ်...၊ ကျောင်းသားမှန်သမျှရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေမဲ့ မပြတ်နိူင်တဲ့ ကျောင်းသံယောဇဉ်တွေ....၊ ကဗျာအရှည်ကြီး ဒီလောက်ကောင်းကောင်း စပ်နိူင်တာ တော်လိုက်တာ၊ ကိုသျှားရော ပြန်တင်ပေးတဲ့ ညီမတန်ခူးရော ကျေးဇူးပါ....။
၀င်စား ပြီး လွမ်းသွားတယ်...
ငါ့ကို ... ပြန်ပေး
ကျောင်းကြီးနဲ့ ပတ်သက်သမျှ အားလုံး ပြန်ပေးပါလို့ အတူတူ ကူတောင်းသွားပါတယ်...
i went back2wks ago. i went to RIT the way i usually go back whenever i went back to burma. i miss everything very much. the poem makes me very sad. it makes me see RIT the way i used to see when i was at RIT. RIT spirit lives on. i believe , we will revive RIT. RIT will rise up again to its lawful position one day. let's work together to revive RIT someday.
အစ်မရေ ကဗျာရှည်ကို တခုတ်တရ ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ၀ိုင်အိုင်တီကျောင်းသူ မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ကျောင်းကြီးကို အလိုလို သံယောဇဉ် ရှိနေခဲ့သူပါ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးများတောင် ထမိတယ် အစ်မ။
ငါ့ ကို 7/2/2 ပြန်ပေး
ငါ့ ကို 8/1/1 ပြန်ပေး
ငါ့ ကို ဦးဝင်းကြည် ပြန်ပေး
ငါ့ ကို ကိုနီတာ ကြီး ပြန်ပေး
ငါ့ ကို ဝပ်ရှော့ဘေး က မုန်ညင်းခင်းတွေ ပြန်ပေး
ငါ့ ကို AME ပြန်ပေး
အဲဒီလိုတွေ လွမ်းနေမှာစိုးလို့ကို ညီမတို့ကို လယ် တော ထဲ ပို့ပစ်လိုက်တာ ထင်ပါ့ရဲ့ အမတန်ခူး ရေ... ဒါပေမယ့် တနေ့မှာ နိုင်ငံတကာက တကူး တက လာကြည့်ရမယ့် ပြတိုက်တွေထဲမှာ ဒီကျောင်း ကြီး ပါတယ်။ ညီမတို့မှာတော့ လွမ်းစရာ မကျန်ဘူး ကျောင်းသားဘ၀... သူပုန်မျိုးဆက် ဆိုပြီး ရုတ်ရုတ် မလုပ်နဲ့ တခုတည်းသော ထွက်လမ်း ရဲ့ ထိပ်တည့်တည့်မှာ ရဲစခန်း ဘေးမှာ သချိုင်းကုန်း... အ၀မှာတင် ပြာဖြစ်အောင် ကိစ္စတုံး ပစ်လိုက်လို့ ရသတဲ့။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာတွေ...
တန်ခူးရေ..ဒီ ပို့စ်ကို FB RIT မှာ tag ပေးပါလားနော်..အားလုံးဝေမျှလွမ်းရတာပေါ့..@ Sawphonelu..ဦးဝင်းကြည်နဲ့ကိုနီတာ..mechanical dept မှာရှိနေတုန်း..လှမ်းခေါ်လိုက်ပါနော်..
Mg Chaint said...
ဒီနေရာ ရောက်တော့ မျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်။ မနှစ်ကလဲ Ethan Aung ရဲ့ youtube နဲ့ အာအိုင်တီဟောင်းတွေအားလုံး မျက်ရည်ဝဲခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်မှာလဲ ကိုသျှားရဲ့ နောက်ဆုံးအပိုဒ်က ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားတွေကို ဆွဲညစ်လိုက်ပြန်ပြီပေါ့.. ကျေးဇူးပဲ တန်ခူးရေ....
It was simply the place where I learned love, joy, sacrifice, sorrow, humility, morality and gratitude.
ကဗျာလေးက အရမ်းထိတယ်.. တချိန်ကဘ၀တွေကလွမ်းစရာပဲ.. ပြန်မြင်မိတိုင်းကွာခြားနေတဲ့အခြေအနေတွေက ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာ..
အိမ်သားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထဲ မျောပါသွားပြီး ခံစားလို့ကောင်းလိုက်တာ...
အစ်မတန်ခူးရေ ဒီကဗျာကို သိပ်ကြိုက်လွန်းလို့ အမှတ်တရ သိမ်းချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မိတယ်...
ဒီကျောင်းကြီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ပို့စ်အတွက် ဒီကဗျာကို သုံးလို့ရနိုင်မလား ခင်ဗျာ...
ကျွန်တော်လည်း ဒီည ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တာ တခုခု တင်နိုင်အောင် ကျိုးစားလိုက်ဦးမယ်။
မောင်အေးဝင်း (ဓါတု- ၁၉၆၉-၁၉၇၆) said...
ဦးချစ် (စက်မှုတက္ကသိုလ်)ကို လွမ်းတယ်။
ဦးချစ် ကို စ, ပြီး ထွက်ပြေးရလို့ မောတာကို လွမ်းတယ်။
ဦးချစ် ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးကို လွမ်းတယ်။
ဦးချစ် မြေဖြူခဲနဲ့ရေးထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ချစ် ဘေးက တီး ဖြည့်ရေးရတာကို လွမ်းတယ်။
၂၅ အောက်တိုဘာမို့ သတိတရ လာပါတယ်။ အကို့ကို ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပါကြောင်း၊ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့စွာ မိသားစု သက်ဆုံးတိုင် အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပါတယ် လို့..
ညီမ ဘလော့လေး ပထမဆုံး စမ်းလုပ်ကြည့်ထား တာ ဝင်ကြည့်ပြီး အကြံပေးပေးပါနော်။